देशभर घटे कोरोना संक्रमित, शनिबार कति थपिए ? « Salleri Khabar
देशभर घटे कोरोना संक्रमित, शनिबार कति थपिए ?
१ माघ, काठमाडाैँ । पछिल्लो २४ घण्टामा चार हजार ६३६ जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको बुलेटिनमा १४ हजार ५५६ परीक्षण गर्दा सो सङ्ख्यामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो । योसँगै सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या २१ हजार ५८४ पुगेको छ ।
चार लाख बढीले लगाए खोप